Maxay uga dhigantahay dadka somaaliyeed Doorashada Madaxweynaha cusub ee DDSI? – Xeernews24
Maxay uga dhigantahay dadka somaaliyeed Doorashada Madaxweynaha cusub ee DDSI?
24. August 2018 /in Qormooyin/Articles /von admin
Gobalka Soomaali-galbeed waxa uu saameyn ku leeyahay Siyaasada, Dhaqaalaha, Amniga, Dhaqanka, magaca, sumcada iyo Dawladnimada Soomaaliya iyo qof kasta oo Soomaali ah halka uu dunida ka joogo.
Cumriga dawlad-deegaanka Soomaali-galbeed waxa uu jiraa 25 sano oo Tegree xukumaysay dalka Ethiopia, waxaana isbedelay mudadaas 12 Madaxweyne oo qaarkood joogay 4 bill kaliya, mana jirin mid dhameystay xilligiisa markii laga reebo Cabdi Maxamuud oo dhameystay 9 sano. sababtuna waxa ay aheyd Tegree oo raadinaysay qof ay is famaan oo u fuliya qorshihii ay ka rabtay Soomaaliya.
17 sano kadib markii ay ku daashay kana siib, kana saar ayey ka heshay Cabdi Maxamuud sumadihii ay raadinaysay, waxa ayna siisay kalsooni buuxda, dhaqaale iyo maleyshiya farabadan oo uu ugu fuliyo ujeedooyinkeeda.
Hadaba casharada iyo fariimaha uu dirayo Qaraxa siyaasada iyo isbedelka 360 Digree wareegay mar kaliya ee ku kooban Gobalka Soomaalida maxaa sababay;
1-Dulmigii,Tacadiyadii iyo Cabudhintii dadka Gobalka oo xadkii dhaaftay kadibna dhalisay Qarax aan loo dul-qaadan karin, lana aamini karin mar danbe xubnihii ku jiray maamulkii Cabdi Ilay.
2-Haraadigii Tegree oo weli raba in uu ku adeegto maamulkii hore ee Jigjiga, colaadna dhex-dhigo Soomaali iyo Oromo.
3-Soomaalidii Gobalka oo Qabiil-Qabiil iyo Degaan-Deegaan loo kala qeybiyey, fitnana la dhex-dhigay, halka ay Qowmiyadaha kale mid mid yihiin.
4-Madaxweyne-yaashii soo maray Gobalka oo u badnaa hal beel markii laga reebo laba, hadana Tacadiyadii ugu badnaa ay ku dhaceen beeshaas oo isku qaadatay eedii difaaca nidaamka iyo dulmigii ugu xumaa ee ku dhaca shucuubta Geeska Afrika.
5-Halgankii ONLF oo ku soo dhamaaday midha la’aan kadib markii ay hana waayeen maamulka Gobalka ayna lumiyeen kalsoonidii dadka Gobalka.
6-Kooxaha iyo Axzaabta kale ee Gobalka oo aan abaabulnayn, diyaarna u aheen in ay buuxiyaan kaalintii maamulkii rajiimka.
7-Dawladda Federaalka oo isbedelka ay ka rabto Gobalada ku tijaabinaysa Gobalka Soomaalida, haddii ay ku guulaysatana si fudud ugu gudubto kuwa kale.
Sababahaas ayaa keenay dood iyo is jiid-jiid kadib in Madaxweynaha Gobalka loo doorto Mudane Mustafa Cagjar oo aan ka tirsanayn Xisbiyada Gobalka iyo ONLF, uuna noqday qof aan loo hayn eedo hore, laguna midoobi karo, dejina kara kacdoonka iyo guuxa Gobalka, isla maanta ayuuna bilaabay laba qodob oo saldhig u ah, Astaamaha Somaalinimada, midnimada iyo kalsoonida Somaalida Gobalka iyo rajada Soomaalida kale sida:
1-Bedelida magacyadii “Soomaalida Ethiopia” “Gobalka Ogadenia” “Kilinka 5 aad” iwm, loona bedelay “Dawlad-deegaanka Soomaaliya” “Soomaali-galbeed” “Qowmiyadda Soomaaliyeed” Iwm.
2-Calankii oo lagu soo celiyey kii ay Tegree-gu bedeshay oo lahaa astaanta Calanka iyo Xidigta 5-ta Somaaliyeed.
Inkasta oo aad loo soo dhaweeyay doorashada M. Mustafe hadana waxaa horyaal;
1-Fursado badan oo uu ku guulaysan karo sida:-dadka oo ka daalay dulmi iyo cabudhin una ooman nabad iyo xorriyad, kooxihii dulmiga iyo cabudhinta oo fashilmay, isbedelada Gobalka iyo dadka Somaaliyeed oo rabta xasiloonida Soomaali-galbeed iwm.
2-Caqado fashili kara haddii aan laga hor-tigin sida;- kooxihii dulmiga iyo cabudhinta oo ku jira xididada dawlada fedaraalka welina jooga Gobalada kale, Soomaali yar oo weli rabta; gobalaysi, qabiilaysi, xukun marooqsi, eex iyo qof jaclaysi iwm.
Waxaa laga bartay doorashada M. Mustafe:-
1-In uusan dulmi daa’im noqon-karin awood iyo magac kasta oo uu yeesho.
2-In halgan kasta oo aan lagu dhisin aragti dheer iyo wada sax ah uu ku dhamaado midha la’aan.
3-In Xisbi ama koox kasta ee wayda kalsoonida dadka uu ka qiima badan yahay hal qof oo kalsooni haysta.
4-In qofkii ku adkeysta mabda’ iyo Mowqif hufan oo cad ugu danbeynta lasoo raadinayo kaligiisba ha noqdee.
5-In Gobalka Soomaali-galbeed uu xuddun iyo laf-dhabar u yahay Gobalada kale ee Soomaaliya, lana qeybsanayaan guul iyo guul-daro, col iyo nabad, dhib iyo dheef iwm.
W/Q:- Dr. Mohamed Gacal (Dr Gacal)
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/08/special-raport.jpg 576 1021 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2018-08-24 11:08:462018-08-24 11:08:46Maxay uga dhigantahay dadka somaaliyeed Doorashada Madaxweynaha cusub ee DDSI?
Waftiga reer Sitti ee Addis Ababa ku sugan (Sawirro) Daawo sawirada;Qodobo Ka Soo Baxay Kulankii Abiy Axmed Iyo Soomaalida Itoobiya”arimo...